Lehilahy iray sahabo ho 20 taona hita faty nihantona tamin’ny hazo, tao amin’ny fokontany Amboara, ambony avaratr’i Katsaoka, kaominina Imerintsiatosika, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 12 ora. Nihantona tamina akanjoba ilay lehilahy izay efa tsy nisy aina intsony. Mbola teny aminy avokoa ny fitafiany rehetra. Tsikaritry ny olona sendra nandalo teny an-toerana ny vata-mangatsiakan’ilay lehilahy io ka nampandrenesiny avy hatrany ny sefo fokontany ao an-toerana, Rakotondravao Jean Pierre. Tonga nijery ny zava-niseho teny an-toerana ny Zandarimaria ao Imerintsiatosika sy ny mpitsabo.
Maty taorian’ny tifitra nahazo azy ny jiolahy iray tanan-kavan’i Del Kely sy ny lehilahy iray hafa namany, ny alarobia lasa teo. Tra-tehak’ireo zandary avy ao Ambohidratrimo tao an-tranony ao Ivoanjo-Anosiala ireo jiolahy sy ny sakaizany roa vavy tamin’izany. Nanohitra ireo mpitandro filaminana tamin’ny alalan’ny fampiasana zava-maranitra anefa ireo jiolahy ka namaly tifitra avy hatrany ireo zandary. Vokany, voatifitra ireo jiolahy roa lahy ka nalefa vonjimaika teny amin’ny HJRA. Fotoana fohy taorian’izay, namoy ny ainy raha mbola tsy tonga teny amin’ny toeram-pitsaboana akory ireo olon-dratsy. Ireo vehivavy roa voasambotra kosa, atao fanadihadiana eny amin’ny tobin’ny Zandarimaria.
Hiatrika fitsarana ao Maintirano, anio, ilay lehilahy voalaza fa tompon’antoka amin’ny fanolanana zazavavikely 11 taona tao Besalampy, ny herinandro lasa teo. Tsiahivina fa zaza notezain’io lehilahy 55 taona io ilay ankizivavikely io ka nanaovany ny filan-dratsiny. Noho ny tahotra sy ny fandrahonana natao ilay niharam-boina io, tsy sahy niresaka amin’ireo ray aman-dreniny ny zava-nisy ilay ankizivavikely. Ny fery efa nihombo teo amin’ny fivavian’ilay ankizivavikely no tsikaritr’ireo ray aman-dreniny ka nitondra azy teny amin’ny CSB II. Tsy tana anefa ny ain’ilay ankizivavikely taorian’ny herisetra nahazo azy.